Faahfaahin ka soo baxaysa iskahorimaad ka dhacay Degmada Diinsoor – Banaadir weyne
Ugu yaraan shan askari ayaa ku geeriyootay shan kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii iskahorimaad hubeysan uu ku dhex maray degmada Diinsoor ciidamo daacad u ah guddoomiyihii hore ee degmadaas iyo ciidamo Boolis ah.
Iskahorimaadka hubeysan ayaa waxaa uu ka dhacay duleedka magaalada Diinsoor iyadoo iskahorimaadkaasna uusan wax qasaare ah ka soo gaarin dad rayid ah.
Guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ee xilka laga qaaday Ibraahim Maxamed Nuur “Shigshigow” ayaa diiday in uu xilka wareejiyo, balse waxaa gacan ku haynta magaalada Diinsoor haatan la wareegay ciidamada Booliska oo garab ka helaya ciidamo AMISOM ah.
Qaar ka mid ah ciidamada daacada u ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ayaa isku soo dhiibay ciidamada Booliska iyadoo magaaladana uu ka cararay guddoomiyihii hore ee degmadaas.
Adeegga ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka magaalada Diinsoor ayaa caadi ku soo laabtay,waxana uu guddoomiyaha gobolka Bay C/qaadir Hilowle Cabdi uu ugu baaqay shacabka degmada Diinsoor inay is dejiyaan ayna taageeraan maamulka cusub. – Jowhar News